လွယ်ကူစွာ China 20FT Office Folding Container House ကိုရောင်းရန်
သီးသန့်မူပိုင်ခွင့်ခေါက်သိမ်းနိုင်သောကွန်တိန်နာများသည်သာမာန်ကွန်တိန်နာအိမ်၏အခြေခံတွင်တိုးတက်မှုအချို့ရှိသည်။ ကုန်သေတ္တာထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါအခန်းကိုချွေတာနိုင်အောင်ခေါက်ထားလို့ရတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် 40HQ တစ်ခုသည်သာမန်ကွန်တိန်နာများထက်ခေါက်သိမ်းဆည်းနိုင်သောကွန်တိန်နာများပိုမို load လုပ်နိုင်သည်။ ထို့ပြင်၎င်းသည်သက်တမ်းတိုတောင်းသောအထုပ်တစ်ဘူးထက်ပိုရှည်သည်။ ထိုသို့သောခေါက်သိုလှောင်သည့်ထုံးမျိုးကိုများသောအားဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောကြောင့်နေထိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ အရွယ်အစား 2500X5800X255 ...
လျင်မြန်စွာတပ်ဆင်ထားသည့် Prefab အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးသံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ဂိုဒေါင်
၁။ ဆောက်လုပ်ရေးစနစ်စိတ်ကြိုက်သိုလှောင်ရုံတွင်သင်ရေးဆွဲထားသည့်ဒီဇိုင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိပါကအချိန်မရွေးကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာအရည်အသွေးမြင့်မားသောသံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး များကိုသာမကဘဲဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ကိုယ်ပိုင်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်သည်မည်မျှပင်သေးငယ်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အကောင်းဆုံးကြိုးစားမည်။ ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းများမှတစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ 1.We သည်သင့်dနှင့်အညီတင်းကြပ်စွာထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
Gable ဘောင်ပေါ့ပါးသောသတ္တုကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး သည်စက်မှုသံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ကိုတည်ဆောက်ထားသည်
1. တည်ဆောက်ခြင်းစနစ်●သံမဏိအလုပ်၏မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရ။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ အထိအချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးနိုင်သည်။ ●သံမဏိကိုယ်ထည်သည်သက်ရောက်မှု၊ တည်ငြိမ်။ အလေးချိန်ကောင်းသောငလျင်ဆန့်မှုသည်ပေါ့ပါးသည်။ ●စက်မှုအဆင့်မြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုသောသံမဏိကိုယ်ထည်။ ●သံမဏိကိုယ်ထည်များသည်လျင်မြန်စွာနှင့်တိကျစွာတပ်ဆင်နိုင်သည်၊ ●သံမဏိကိုယ်ထည်သို့မဟုတ်သံမဏိကိုယ်ထည်၏အတွင်းပိုင်းနေရာအကျယ်အ ၀ န်းရှိပြီး prefab သံမဏိကိုယ်ထည်၏အကျယ်မှာ ၈၀ မီတာအထိရှိသည်။ ●တံဆိပ်ခတ်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပေါ်စေဖွယ်ရှိသည်။ ●လှပသော ...
နိမ့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသောသတ္တုအဆောက်အအုံသည်နှစ်ထပ်သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ဂိုထောင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်
၁။ တပ်ဆင်ခြင်းသံမဏိကိုယ်ထည်အသစ်များတပ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေသည်။ စတုရန်းမီတာ ၂၀၀၀ ကို ၁ ပတ်အတွင်းလုပ်သား ၅ ယောက်ပြီးစီးနိုင်သည်။ ၁။ အဓိကသံမဏိဘောင်များ (ဖွဲ့စည်းပုံ) အားလုံးသည်ခွန်အားမြင့်သောသော့ခလောက်များဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဂဟေဆော်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်း၏ 'installation ကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ကွက်များနှင့်ဆင်တူသည်။ (၂) ကျွန်ုပ်တို့၏သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ၏နံရံများနှင့် purlins အမျိုးအစား ၂ ခုလုံးကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ (အနည်းဆုံးလေးမျိုးအမျိုးအစားလေးမျိုးရှိပါသည်။ အခြားထုတ်လုပ်မှုဖြင့်အမိုးနှင့်နံရံများတွင်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ )
၁။ ကြက်မွေးမြူရေးအိမ် Vanhe Modular House Co. , Ltd သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်သံမဏိကိုယ်ထည်များထုတ်လုပ်ခြင်းကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များထုတ်လုပ်သည်။ သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး များ (သံမဏိကိုယ်ထည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရုံ၊ သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး အဆောက်အအုံများ၊ သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး များ) ကိုဒီဇိုင်းဆွဲ၊ တပ်ဆင်ပြီးတပ်ဆင်ပါ။ နှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ၊ တင်ပို့သည့်နိုင်ငံပေါင်း ၉၀ ကျော် - အီသီယိုးပီးယား၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ တောင်အာဖရိက အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ ဒူဘိုင်း၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ထိုင်း၊ သြစတြေးလျ၊ ပြင်သစ်၊ စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းပုံ ...
Hot Sale အကြီးစားသတ္တုခေတ်သစ်မိုးဒဏ်ခံနိုင်မှုသံမဏိကိုယ်ထည်ကြက်သားအိမ်ကြက်အိမ်အိမ်နွားမွေးမြူရေးခြံ
၁။ VANHE ကြက်အိမ်အိမ် Vanhe Modular House Co. , Ltd သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိသံမဏိကိုယ်ထည်များထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး များ (သံမဏိကိုယ်ထည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရုံ၊ သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး အဆောက်အအုံများ၊ သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး များ) ကိုဒီဇိုင်းဆွဲ၊ တပ်ဆင်ပြီးတပ်ဆင်ပါ။ နှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ၊ တင်ပို့သည့်နိုင်ငံပေါင်း ၉၀ ကျော် - အီသီယိုးပီးယား၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ တောင်အာဖရိက အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ ဒူဘိုင်း၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ထိုင်း၊ သြစတြေးလျ၊ ပြင်သစ်၊ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တတ်နိုင်သမျှ ...
ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး အိမ်ဆိတ်သည်ကြက်မွေးမြူရေးခြံဒီဇိုင်းကိုသွန်းလောင်းခဲ့သည်
၁။ VANHE ကြက်အိမ်အိမ် Vanhe Modular House Co. , Ltd သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိသံမဏိကိုယ်ထည်များထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး များ (သံမဏိကိုယ်ထည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရုံ၊ သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး အဆောက်အအုံများ၊ သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး များ) ကိုဒီဇိုင်းဆွဲ၊ တပ်ဆင်ပြီးတပ်ဆင်ပါ။ နှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ၊ တင်ပို့သည့်နိုင်ငံပေါင်း ၉၀ ကျော် - အီသီယိုးပီးယား၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ တောင်အာဖရိက အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ ဒူဘိုင်း၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ထိုင်း၊ သြစတြေးလျ၊ ပြင်သစ်၊ ၁) ။ ယေဘုယျအားဖြင့် ...
China Prefabricated ရေချိုးခန်းဒီဇိုင်းအပြင်ဘက်အိတ်ဆောင်အိမ်သာမိုဘိုင်းရေချိုးခန်းခန်း
၁။ မိုဘိုင်းအိမ်သာအိတ်ဆောင်အိမ်သာ Prefab အိတ်ဆောင်အိမ်သာသည်သံမဏိဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဘောင်ကိုယ်ထည်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အောက်ခြေကိုချည်နှောင်ထားသောသံမဏိသို့မဟုတ် I-beam နှင့်ဂဟေဆော်သည်။ ကော်လံကိုစတီးဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ နံရံပစ္စည်းများသည်အရောင်ရှိသောသံမဏိပြားများ၊ ဖန်ထည်၊ သံမဏိနှင့်သတ္တုထည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အိတ်ဆောင်အိမ်သာများသည်အလေးချိန်ပေါ့သည်၊ အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ အသွင်အပြင်ကောင်းမွန်သည်။ Prefab အိမ်သာများသည်အတွင်းခန်းအဆောက်အအုံများဖြစ်သည်။
လွယ်လွယ်ကူကူတပ်ဆင်နိုင်သောအိတ်ဆောင်အများသုံးအိမ်သာ EPS sandwich madecheap mobile wc toilet sanitary
၁။ မိုဘိုင်းအိမ်သာအိတ်ဆောင်အိမ်သာအိတ်ဆောင်အိမ်သာသည်မြို့ကြီးများ၊ ပန်းခြံများ၊ ခရီးဆောင်အိမ်သာသည်အဆင်ပြေလွယ်ကူပြီးလူတို့၏နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ကြော့ရှင်းသောအသွင်အပြင်များဖြင့်သူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအဆောက်အအုံများသည်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ခရီးဆောင်အိမ်သာများသည်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ Size One ခန်း - ၁.၁.၁ MX1.1MX2.3H နှစ်ခန်း - ၁.၁.၁X2.2MX2.3H အခန်းသုံးခန်း - ၁.၁.၁X3.3MX2.3H စတိုင်ထိုင်ခုံ / ထိုင်ခင်းထိုင်ခုံ ...
၁။ မိုဘိုင်းအိမ်သာအိတ်ဆောင်အိမ်သာအိတ်ဆောင်အိမ်သာသည်မြို့ကြီးများ၊ ပန်းခြံများ၊ ခရီးဆောင်အိမ်သာသည်အဆင်ပြေလွယ်ကူပြီးလူတို့၏နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ကြော့ရှင်းသောအသွင်အပြင်များဖြင့်သူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအဆောက်အအုံများသည်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ခရီးဆောင်အိမ်သာများသည်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ ၂။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များပိုမိုအရောင်အသွေးစုံခြင်းနှင့်တွဲဖက်ထားသည့်အိမ်သာကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ၃။ အားသာချက် ၁. စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း၊ သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Prefabricated အိမျခေါက်ကျယ်ပြန့် Foldable Prefab ကွန်တိန်နာနေအိမ်
၁။ ခေါက်သိမ်းဆည်းရန်ကွန်တိန်နာအိမ်တည်ဆောက်ခြင်းဤထူးခြားသောခေါက်သိမ်းနိုင်သောကွန်တိန်နာအိမ်ကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်တစ် ဦး ကအချို့သောအလုပ်သမားစခန်းများကိုလိုချင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကဒီအိမ်ကိုသူ့အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တယ်။ ခေါက်သိမ်းထားတဲ့အိမ်ကိုခေါက်သိမ်းပြီးအကြိမ်ကြိမ်ဖွင့်လို့ရပြီး ၁၀ မိနစ်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတယ်။ Prefabricated ခေါက်သိမ်းထားသောဘူးကိုပေါ့ပါးသောသံမဏိကိုယ်ထည်နှင့်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ပြားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ပုံစံအသစ် Prefab ခေါက်တပ်ဆင်ထားသောကွန်တိန်နာအိမ်သေးငယ်သောအိမ်
၁။ ခေါက်သိမ်းထားသောကွန်တိန်နာအိမ်အထူးသီးသန့်မူပိုင်ခေါက်သိမ်းထားသောကွန်တိန်နာခန်းသည်အသံလှည့်ခြင်း၊ မီးခံနိုင်ခြင်း၊ ရေစိုခံနိုင်ခြင်း၊ သဲမခံနိုင်ခြင်း၊ windproof နှင့် shockproof နှင့်အခြားလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယာယီသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းနေထိုင်နိုင်သည်။ ရုံးခန်း၊ သိုလှောင်ခန်းလေ့လာရန်အခန်းနှင့် သံမဏိဘောင်များသည်ကြာရှည်ခံ။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ခြင်း၊ နံရံနှင့်ခေါင်မိုးသည်အရောင်အသွေးရှိသောသံမဏိပြားများဖြစ်ပြီးအပူကိုကာကွယ်ရန်ကောင်းမွန်သည်။ သဲကန္တာရ၊ မြက်ခင်းပြင်၊ နှင်းကျင်း၊ ပင်လယ်ကမ်းခြေများတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ အားလုံး ...